Etu I Si Eji Nyocha Onwe Ghọta Ihe Nlere Azụmaahịa | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ aka ị na - emekọrịta n'etiti ndị ahịa - na ụzọ ha si ezute ụdị gị - agbawaala n'afọ ndị na - adịbeghị anya. N'oge gara aga, nhọrọ ndị dị mfe: ị na-agba ọsọ mgbasa ozi, mgbasa ozi na-agbasa ozi, ma eleghị anya ozi ozugbo, ma ọ bụ nchikota. Taa enwere ọchụchọ, ngosipụta n'ịntanetị, mgbasa ozi mmekọrịta, ekwentị mkpanaaka, blọọgụ, saịtị nchịkọta, na ndepụta ahụ na-aga n'ihu.
Site na mmụba nke ihe ndị na-emetụ ndị ahịa aka abiala nyocha nke ọma banyere ịdị irè. Kedu uru dị na dollar a na-etinye n'ọrụ ọ bụla? Kedu usoro na-enye gị egwu kachasị maka ego gị? Kedu ka ị ga - esi bulie mmetụta na - aga n'ihu?
N'oge gara aga, mmụba dị mfe: ị gbara mgbasa ozi ma chọpụta ọdịiche dị na mmata, okporo ụzọ na ahịa. Taa, mgbanwe mgbasa ozi na-enye nghọta banyere mmadụ ole pịaro na mgbasa ozi gị wee bịa ebe ị chọrọ.
Ma gịnị na-emezi?
Nyocha nyocha nwere ike inye azịza nye ajụjụ ahụ. Ọ nwere ike ịnakọta data site n'ọtụtụ ebe dịpụrụ adịpụ ma nke dị na azụmaahịa gị yana nke mpụga gbasara mgbasa ozi ndị ahịa. Ọ nwere ike inyere gị aka ikpebi ụzọ ọwa kacha dị ọnụ ahịa n'ịmepụta nzaghachi nke nzaghachi. Nke kachasị mkpa, ọ nwere ike inyere gị aka ịmata ndị ahịa kachasị mma n'ime otu ahụ ma mee ihe ọmụma ahụ site na ịmegharị usoro ịzụ ahịa gị ka ị na-aga n'ihu.
Olee otú ị pụrụ ahu nagide njirimara analysis rụọ ọrụ nke ọma ma rite uru ndị a? Nke a bụ ihe omumu banyere otu ụlọ ọrụ mere ya:
Ihe eji eme ihe maka nyocha nyocha
Companylọ ọrụ na-arụpụta ngwa ahịa na-ere ngwa nke na-eme ka ndị ọrụ mepụta, nyochaa ma kesaa dọkụmentị na ngwaọrụ ọ bụla. Ná mmalite, ụlọ ọrụ ahụ mejupụtara nke atọ nchịkọta Ngwaọrụ nwere dashboard ejiri rụọ ya iji soro usoro dị ka nbudata, kwa ụbọchị / kwa ọnwa, onye ejiri oge, oge ejiri ngwa ahụ, ọtụtụ akwụkwọ e mepụtara, wdg.
Otu Nchịkọta Otu Adịghị Adabara All
Ka uto ụlọ ọrụ ahụ gbawara na ọnụọgụ ndị ọrụ ha toro na nde, ụzọ a-ụzọ niile dabara adaba nghọta amabaghị. Onye nke atọ ha nchịkọta ọrụ enweghị ike ijikwa njikọ nke ezigbo oge data site na ọtụtụ isi mmalite dịka ndekọ ihe nkesa, ndekọ weebụ na mgbasa ozi.
Kedu ihe ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ nyochaa njirimara na gafee ọtụtụ ngebichi na ọwa iji nyere ha aka ikpebi ebe a ga-eji ego azụmaahịa ọzọ na-esote maka nnweta ndị ahịa ọhụrụ. Otu ihe atụ bụ nke a: onye ọrụ hụrụ mgbasa ozi Facebook nke ụlọ ọrụ ahụ mgbe ha na ekwentị ha, wee chọọ nyocha banyere ụlọ ọrụ na laptọọpụ ha, ma mesịa pịa ịwụnye ngwa ahụ site na ngosi ngosi na mbadamba nkume ha. Onyinye na nke a chọrọ ịkekọrịta otuto maka inweta onye ahịa ọhụrụ ahụ gafere mgbasa ozi mmekọrịta na ekwentị, nyocha akwụ ụgwọ / nyocha na PC na ngosipụta ngosipụta ngwa-ngwa na mbadamba.
Companylọ ọrụ ahụ chọrọ imekwu ihe ma chọpụta ebe ahịa ahịa dị n'ịntanetị nyeere ha aka inweta ndị ọrụ ha kacha baa uru. Ọ dị ha mkpa ịchọpụta omume ndị ọrụ - karịa ihe omume ịpị-ịwụnye - nke pụrụ iche na ngwa ahụ ma mee ka onye ọrụ ahụ baa uru na ụlọ ọrụ ahụ. Na mbido ya, Facebook mepụtara ụzọ dị mfe ma dịkwa ike iji mee nke a: ha chọpụtara na ọnụọgụ ndị mmadụ "ndị enyi" n'ime ụbọchị edepụtara bụ nnukwu amụma maka etu onye ọrụ ga-esi tinye aka ma ọ bụ baa uru. bụrụ n'ikpeazụ. Mgbasa ozi n'ịntanetị na ndị ọzọ nchịkọta sistemụ kpuru ìsì nye ụdị ọrụ a na-ewepụ oge, omume siri ike na-eme n'ime ngwa.
Omenala dị ha mkpa njirimara analysis ịrụ ọrụ ahụ.
Nkọwapụta Onwe bụ Ngwọta
Na-ebido, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ebumnuche mbụ: ịchọpụta kpọmkwem etu onye ọrụ ọ bụla nyere iji na-arụ ọrụ na ngwaahịa ha n'otu oge. Ozugbo emere mkpebi ahụ, ha nwere ike ịmalite ịkụbanye na data ahụ iji mepụta ngalaba profaịlụ nke ndị ahịa dabere na ọkwa ha dị ka ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ na ego ha na-akwụ kwa ọnwa. Site na ijikọ data abụọ ndị a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịchọpụta ndị ahịa enyere. ndu ndu - ọnụọgụ nke kọwara ụdị ndị ahịa nwere ego ha nwere. Ozi ahụ, n'aka nke ha, nyere ha ohere ịmatakwu ndị ọrụ ndị ọzọ - ndị nwere otu profaịlụ "ndụ" - site na nhọrọ mgbasa ozi akọwapụtara nke ọma, yana onyinye dị oke mkpa.
Nsonazụ ahụ? Ebumnuche, jiri ozi ịre ahịa karịa. Na-aga n'ihu na-eto. Na usoro nyocha njirimara nke omenala ebe enwere ike itolite ma gbanwee ka ụlọ ọrụ ahụ gara n'ihu.
Nnyocha nyocha nke ọma
Mgbe ị malitere itinye aka na njirimara analysis, ọ dị mkpa ka ị buru ụzọ kọwaa ihe ịga nke ọma n'okwu nke gị - ma mee ka ọ dị mfe. Jụọ onwe gị, onye ka m weere dị ka ezigbo onye ahịa? Mgbe ahụ jụọ, gịnị bụ ebumnobi m n’ebe onye ahịa ahụ nọ? Nwere ike ịhọrọ ịba ụba na-eme ka iguzosi ike n'ihe gị na ndị ahịa gị kacha baa uru. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịhọrọ ikpebi ebe ị nwere ike ịchọta ndị ahịa dị oke ọnụ ahịa dịka ha. Ihe niile dị n'aka gị, yana ihe dịịrị nzukọ gị.
Na nkenke, nyocha njirimara nwere ike ịbụ ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji chịkọta data sitere n'ọtụtụ ebe dị n'ime na nke ndị ọzọ, ma nwee uche nke data ahụ na usoro ị kpebiri kpọmkwem. Ga-enweta nghọta ị chọrọ iji kọwaa nke ọma ma zute ebumnuche gị, wee mezuo atụmatụ gị iji nweta ROI kachasị elu na dollar ahịa ọ bụla ejiri.
Gịnị bụ Data Warehouse dị ka Ọrụ
N’oge na-adịbeghị anya, anyị dere banyere otu teknụzụ data na-arịwanye elu maka ndị ahịa. Wlọ nkwakọba data na-enye ebe nchekwa dị n'etiti akpịrịkpa ma na-enye nghọta dị ukwuu na mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa - na-enyere gị aka iweta oke ahịa nke ndị ahịa, azụmahịa, data ego na ahịa. Site n'iji data ntanetị, nke na-adịghị n'ịntanetị na nke ekwentị na ọdụ data akọrọ dị n'etiti, ndị na-ere ahịa nwere ike inyocha ma nweta azịza ha chọrọ mgbe ha chọrọ ya. Iwulite ulo nkwakọba ihe bu ihe oru diri ulo oru ndi ozo - ma ulo nkwakọba ihe dika Service (DWaaS) na edozi okwu maka ulo oru.
Banyere BitYota Data Warehouse dị ka Ọrụ
Edere post a site na enyemaka nke BitYota. Ylọ nkwakọba ihe nke BitYota dị ka ihe ngwọta Ọrụ na-ewepụ isi ọwụwa site na ịtọlite ​​ma jikwaa ikpo okwu data ọzọ. BitYota na-enyere ndị ahịa aka inweta ụlọ nkwakọba ihe data ha ngwa ngwa ma na-arụ ọrụ, na-adị mfe ijikọ na igwe ojii na ịhazi ụlọ nkwakọba ihe gị. Teknụzụ na-eji SQL eme ihe na teknụzụ JSON iji jụọ ụlọ nkwakọba ihe gị n'ụzọ dị mfe ma na-abịa na ezigbo data oge maka nchịkọta ngwa ngwa.
Otu n'ime ndị isi na-egbochi ngwa ngwa ngwa ngwa nchịkọta bụ mkpa ịgbanwe data tupu ịchekwa ya na gị nchịkọta sistemụ. N'ime ụwa ebe ngwa na-agbanwe mgbe niile, data na-esite n'ọtụtụ ebe, yana n'ụdị dị iche iche, pụtara na ụlọ ọrụ na-ahụkarị onwe ha ma itinye oge dị ukwuu na ọrụ mgbanwe data ma ọ bụ ihu gbajiri nchịkọta usoro. BitYota na-echekwa ma na-enyocha data na usoro nke obodo ya na-ewepụ mkpa maka ịdị nro, na-ewe oge usoro mgbanwe data. Ighapu mgbanwe data na-enye ndị ahịa anyị ngwa ngwa nchịkọta, ike mgbanwe kachasị, na ikwesị ntụkwasị obi zuru ezu. BitYota
Dika mkpa gi si agbanwe, inwere ike igbakwunye ma obu wepu onu site na igwe gi. Dị ka ihe ngwọta zuru ezu, BitYota Monitors, jikwaa, ndokwa, na akpịrịkpa data data gị, ka ị nwee ike lekwasị anya na ihe dị mkpa - nyocha data gị.
Tags: analysisAttributionnjirimara analysisbityotadata faili ntanetịimeụlọ nkwakọba ihe datankwakọba data dị ka ọrụihe omuma ahiaezigbo oge data faili ntanetịime